Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || शालिकराम, रवि र केही प्रश्नहरु – kayakairan.com
८ भाद्र २०७६, आईतवार ०३:३६
पछिल्लो १५–२० दिनदेखि देशमा एउटा तरंग फैलिएको छ । टेलिभिजनकर्मी शालिकराम पुडासैनीको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणका तरंग हुन् ती । काठमाडौंमा कार्यरत पुडासैनीको लास नारायणगढको होटलको कोठाभित्र झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेपछि यो सुरु भएको तरंगको श्रृंखला जारी नै छ । साउन २० बाट यो घटनाको सुरुआत भएको हो ।
साउन २० गते एक्कासि पुडासैनीको लास भेटियो । सास र लासमा यही भिन्नता त छ । सासहित भेट्दा केही फरक छैन । सग्लो मान्छे यताउति हिड्छ । कसैलाई भेट्छ । विभिन्न काम गर्छ । सामान्य नै छ । तर, त्यही मान्छेमा रहेको एकमुठी सास फुत्त बाहिर निस्कन्छ अनि त्यही एकमुठी सासको आडमा उसले के गरिरहेको थियो ? एकमुठी सास धान्न कस्ता गतिविधि गरिएका थिए ? भन्ने विस्तारै खुल्दै जान्छ ।
एकमुठी सासकै भरमा मान्छे हिरो हुन्छ । हाइट लिन्छ । संसार जित्छ । कोही गुमनाम पनि हुन्छ, त्यो फरक कुरा हो । तर, एकमुठी सास रहुञ्जेल नै हो अनेक रवाफ । इज्जत । मान । प्रतिष्ठा । वा गुमनाम पनि । वा बदनाम पनि । वा धारे हात पनि । वा वाहीवाही !
तथ्य के होला ? त्यसको पुष्टि गर्ने वा किटान गर्ने ठाउँमा हामी छैनौं । प्राप्त तथ्यहरुलाई विश्लेषण गर्ने ल्याकत मात्रै हामीसँग छ । अहिलेसम्म बाहिर आएको तथ्य हेर्दा एकमुठी सास रहुञ्जेल पुडासैनीभित्र कयौं मुठीको ज्वारभाटा थिए कुण्ठाका । तनावका । बेमेलका । महत्वाकांक्षाका । एकमुठी सास गएपछि न ती थाहा भए । पहिले थाहा पाएको भए बचाउँदा हुन् आसेपासेले । परिवारले । वा साथीले ।
यसको आधिकारिक जवाफ एकदिन आउने नै छ । आउनै पर्छ । तर, विभिन्न सार्वजनिक तथ्यले यो हत्या थिएन, आत्महत्या नै थियो भन्ने दावी गरिरहेका छन् । प्रहरीको अनुसन्धान हत्यातिर केन्द्रित छँदै छैन । खाली आत्महत्यातिरै छ । हत्या हुनसक्ने सुइँको प्रहरीलाई छैन । अर्थात उसको ध्यान त्यता देखिन्न पनि । आत्महत्या हुनसक्ने बलियो आधार भनेको पोष्टमार्टम रिपोर्ट होला । घटनाका बेला देखिएका विभिन्न प्रमाण होला । परिस्थिति होला । इतिहास होला । परिवेश होला । वा अरु केही । त्यो प्रहरीले भन्ला । हामी नभनौं ।
तर, यतिचाहिं भन्न सकिन्छ कि, प्रहरीले अहिलेसम्म न्यायिक हिरासतमा राखेर तीनजनामाथि आत्महत्यामा दुरुत्साहन गरेको अभियोगमा चलाइरहेको अनुसन्धानले चाहिं यो घटनामा पुडासैनीको मृत्यु आत्महत्याकै कारण भएको हो ।
दुरुत्साहन भनेको के ?
बृहत नेपाली शब्दकोशानुसार दुरुत्साहनको शाब्दिक अर्थ हो–अरुलाई कानूनी वा नैतिक दृष्टिले अवैध कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्ने काम, खराब काममा उक्साने चाल । तर, कानूनले के भन्छ त ? कानूनले यतिमात्रै भन्छ कि कसैलाई आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पु¥याउनु हुँदैन । अर्थात दुरुत्साहन गर्नु हुँदैन । दुरुत्साहन केलाई मान्ने ? केलाई नमान्ने ? यस विषयमा कानूनले केही बोलेको छैन । यसलाई व्याख्या गर्ने कसले हो त ? निर्विवाद सर्वोच्च अदालतले । किन ? सर्वोच्च अदालत नै सबैखाले कानूनको अन्तिम व्याख्याता हो । नेपालमा क्रियाशील संविधानले नै त्यसलाई प्रष्ट गरेको छ–संविधान वा त्यसअन्तर्गको कानूनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै हो ।
दुरुत्साहन केलाई मान्ने ? केलाई नमान्ने ? यस विषयमा कानूनले केही बोलेको छैन । यसलाई व्याख्या गर्ने कसले हो त ? निर्विवाद सर्वोच्च अदालतले । किन ? सर्वोच्च अदालत नै सबैखाले कानूनको अन्तिम व्याख्याता हो ।
कानूनमा कुनै समस्या आए वा संविधानसँग बाझिए वा कुनै प्रश्न उठे सर्वोच्चले जे भन्यो त्यही गर्ने हो । अनि अर्को कुरा सर्वोच्चमा यस विषयमा कुनै नजिर पनि स्थापित भइसकेको छैन । दुरुत्साहन भन्ने कुरालाई कानूनमा घुसाइएकै २०७५ भदौ १ देखि मुलुकमा लागू भएको फौजदारी कानून संहितामा हो । त्यसपछि सर्वोच्चले यस्तो मुद्दामा नजिर स्थापित गर्ने अवसर नै पाएको छैन ।
यसको निरुपण गर्न सर्वोच्च नै पुग्ने त ?
हुन पनि सक्छ । यो मुद्दामा पक्राउ परेका तीन जनाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको न्यायिक हिरासतमा १० दिन बितासकेका छन् । यदि प्रहरीले उनीहरुलाई लगाएको अभियोगमा आवश्यक अनुसन्धान पूरा भइसकेको छ भने अब सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्छ । त्यसको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्ययन गरी जिल्ला अदालतमा अभियोजनपत्र दर्ता गर्छ (नगर्न पनि सक्छ) । जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई दोषी देखाउन पनि सक्छ वा सफाइ दिन पनि ।
अनि के गर्ने ?
नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझे उच्च अदालत जान पाइन्छ । त्यहाँ पनि एउटा फैसला आउँछ । त्यहाँको पनि चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जान पाइन्छ (जुनसुकै पक्ष)। मुद्दाका दुई पक्ष हुन्छन्–पक्ष र विपक्ष । वा वादी र प्रतिवादी । फौजदारी अभियोग भएकोले यो सरकारवादी मुद्दा हुन्छ । अर्थात यो घटनामा जिल्ला न्यायाधिवक्ताले अभियोजनपत्र दर्ता गर्छ । अर्थात सरकारी वकिलले । प्रतिवादीले आफ्नो वकिल राख्न पाउँछन् । अहिले प्रतिवादी तीनजनाको तर्फबाट विभिन्न कानून व्यवसायीहरुले यो अभियोगमा बहस गरिरहेका छन् ।
यो अवधिमा के भयो ?
पुडासैनी मृत्यु प्रकरण बाहिर आउनेबित्तिकै सयथरि मान्छेका सयथरि कुरा आए । अझै आत्महत्या दुरुत्साहनको आरोपमा टेलिभिजनकर्मी रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अर्की युवती पक्राउ परेपछि त झनै तर्क–वितर्क आउन थाले । कसैले पुडासैनीको हत्या भएको भने । कसैले आत्महत्या नै हो भने । कसैले मार्ने मान्छेको किटानसमेत गरे । नामै भन्दिन्छुसम्म भने माताको नाममा । ज्योतिषको नाममा । कसैले भविष्यवाणी गरे यति दिनसम्म हिरासतमा बसेर छुट्छन् उनीहरु । वा रवि ।
आन्दोलनमा जसले जे पनि बोल्न सक्छ । भीड उच्छृंखल हुन सक्छ । उत्तेजित हुन सक्छ । मुखछाडा हुन सक्छ । किनकि आन्दोलनमा जे पनि जायज हुन्छ । तर, नाजायज त्यो हो कि, भीडको त्यही सुन्न नसकिने भाषा दुनियाँले थाहा पाउने गरी प्रसारण गर्नु ।
रवि पक्राउ पर्नासाथ उनका हजारौं समर्थक सडक निस्के । रविलाई विनासर्त रिहा गर्न उनीहरुले एकसुत्रीय रटान लगाइरहे । यस्तै हौवामा मलजल कसले गरे युट्युबखेतीवालले । उनीहरु भीडमा पसे । आन्दोलनमा जसले जे पनि बोल्न सक्छ । भीड उच्छृंखल हुन सक्छ । उत्तेजित हुन सक्छ । मुखछाडा हुन सक्छ । किनकि आन्दोलनमा जे पनि जायज हुन्छ । तर, नाजायज त्यो हो कि, भीडको त्यही सुन्न नसकिने भाषा दुनियाँले थाहा पाउने गरी प्रसारण गर्नु । युट्युबवालाले त्यही गरे । वास्तवमा युट्युबवालाले यही गल्ती गरे । उनीहरुले गरेका गल्तीको सजाय भोग्ने क्रममा छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान चलाइरहेका केही आन्दोलनकारीहरु ।
के आन्दोलन गर्नु नाजायज थियो ?
यसको उत्तर खोज्नुभन्दा अघि आन्दोलन किन भयो भन्नेमा जानुपर्छ । रवि लामिछाने धेरैका लागि ‘आइडल’ हुन् । अनेक पीडामा परेकाहरुको लागि उनी अन्तिम समाधानकर्ता जस्तो बनेका छन् । यद्यपि उनले गरिरहेको ‘सञ्चारकर्म’ मूलधारे पत्रकारितामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस छुट्टै फोरमका लागि रोचक हुनसक्छ । त्यसमा अहिले नजाउँ । तर, उनले गरेका कामका सकारात्मक नतिजा नै अहिलेको आन्दोलनका मूल कारक हुन् । त्यस्तो के गरे उनले ? जगजाहेर छ कि मुलुकमा राज्यसत्ताप्रति निराश जनतालाई उनले आशा जगाए । टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाए । दलालहरुको अनुहार सबैले चिन्ने गरी छरपष्ट देखाइदिए । बेथिति हुनहुन्न भन्ने कुरा टेलिभिजनबाट ठूलो भोल्युममा भने । राज्यले चित्तबुझ्दो काम नगरेका बेला एकजना व्यक्तिले टेलिभिजनबाट गर्न खोज्छ भने जनताले साथ दिने कि नदिने ? दिने उनीहरुले साथ दिए । वा समर्थन गरे । वा रविको जयजयकार गरे । त्यसैले उनलाई नै पक्राउ गरेपछि नै जनता सडकमा आएका हुन् ।
अब जाऔं आन्दोलन जायज कि नाजायज भन्नतर्फ । सामान्यरुपमा हेर्दा आफूले समर्थन गरेको व्यक्ति नफसून् भन्नु एकदमै जायज हो । राज्यले एउटा फौजदारी अभियोगमा निष्पक्ष छानबिन गरोस् भन्ने कामना गर्नु नाजायज हुँदै होइन । तर, त्यसो भन्दै प्रहरी कार्यालयमै ढुंगा हान्न आउनु, सडकनै जाम गर्न लाग्नुचाहिं शतप्रतिशत नाजायज ।
हामी कानूनी राज्यमा विश्वास गर्छौं । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष विधिको शासन हो । कानूनी सर्वोच्चता हो । न्यायिक निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौं । यदि यसलाई मान्ने हो भने कसैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउँदैमा कि यति धेरै चिन्ता गर्नुप¥यो ? कानूनअनुसार छानबिन गरेर भोलि रवि र उनीसँगै थुनामा रहेकाहरु निर्दोष सावित भए त झनै उनीहरुको उचाइ बढ्दैन र ? छानबिन नै नगर, तुरुन्त उनीहरुलाई छोडिदेऊ, उनीहरु निर्दोष छन् भनेर सडकबाटै फैसला गरिदिने भए त किन चाहियो न्यायालय ? किन चाहियो प्रहरी ? किन चाहियो विधिको शासन ? किन चाहियो राज्य संयन्त्र ? फेरि उनीहरु पूरापूर निर्दोष भएको तथ्य कोसँग छ ? ती तथ्य त अनुसन्धानले पत्ता लगाउने हो नि । दोषी र निर्दोष करार गर्ने अधिकार विधिको शासन भएको देशमा न्यायालयसँग मात्रै हुन्छ ।
आन्दोलनको अर्थ छैन त ?
कतिपयले भनेका छन्–यो मुलुकमा कति ठूला परिवर्तन त आन्दोलनबाट भए, यो सानो कुरामा किन नहुने ? पक्कै पनि हो, कयौं राजनीतिक परिवर्तन आन्दोलनबाटै भएका हुन् । तर, ती राजनीतिक मुद्दा थिए । व्यवस्था परिवर्तनको सवाल थिए । निरंकुशता हटाएर स्वतन्त्रता ल्याउने कुरा थिए । विधिको शासन ल्याउने कुरा थिए । अहिलेको सवाल भनेको त विधिको शासनानुसार कसैको न्याय निरुपण गर्ने हो । पुडासैनी परिवारले एक आफन्त गुमाएको छ । उनीहरु पीडामा छन् ।
प्रहरीले कुनै अभियुक्तलाई न्यायिक हिरासतमा २५ दिनसम्म राख्न सक्छ । तर, त्यसको लागि मनासिव कारण अदालतले खोज्छ नै । आम अनुमान के छ भने यदि दुरुत्साहनको अभियोगमा मात्रै प्रहरीले खोज गरिरहेको हो भने अहिलेसम्म आवश्यक छानबिन सकिनुपर्ने हो ।
अनेकमा अनेक आशंका छन् । ती सबै आशंका हटाएर उनको परिवारलाई न्यायको अनुभूति गराउन पनि त हामीले कानूनी बाटो रोज्नुभन्दा अरु विकल्प छैन । सबैभन्दा उपयुक्त बाटो पनि त यही हो । त्यसकारण आन्दोलनकै बलमा छानबिन रोक्न खोज्नु मूर्खता हो । रवि आफैंले भनेका थिए कि प्रहरीले गर्ने हरेक छानबिनमा सहयोग गर्छु । न्यायका निम्ति जहाँ जानुपरे पनि जान्छु । त्यति ठूलो नैतिक साहस देखाएका रविका समर्थकचाहिं किन यति आत्तिनु प¥यो । कुरौं न केही दिन ।
सडक निस्कनेहरुको एउटा जबरजस्त आशंका छ–रविलाई राज्य संयन्त्रले फसाउने प्रपञ्च रचेको छ । उनीहरुले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म विभिन्न ‘कनेक्सन’ देखाएर त्यो आशंकामाथि बल पु¥याइरहेका छन् । यो पनि सबै राज्यशक्तिप्रति घट्दै गएको जनविश्वास र न्यायालयमा भेटिएका केही कैफियतकै कारण उब्जिएका हुन् । तर, यो सजिलो पनि त छैन ।
मामला आजबाट शान्त हुन पनि सक्छ । वा थप तात्न पनि । प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान सकेको हो भने अब यो अभियोगमा उसको भूमिका सकिन्छ । अब बाँकी भूमिका सरकारी वकिलको हुन्छ । अझै प्रहरीले अनुसन्धान नसकेको र थप समय आवश्यक भएको पुष्ट्याइँ अदालतसमक्ष ग¥यो भने आज पनि थप म्याद माग्न सक्छ । र पाउन पनि । किनकि प्रहरीले कुनै अभियुक्तलाई न्यायिक हिरासतमा २५ दिनसम्म राख्न सक्छ । तर, त्यसको लागि मनासिव कारण अदालतले खोज्छ नै । आम अनुमान के छ भने यदि दुरुत्साहनको अभियोगमा मात्रै प्रहरीले खोज गरिरहेको हो भने अहिलेसम्म आवश्यक छानबिन सकिनुपर्ने हो । प्रहरीले सकेको छैन भन्यो भने वा नसकिएको पुष्टि ग¥यो भने थप हिरासतमा राख्ने अनुमति अदालतले दिन पनि सक्छ । त्यो अवस्थामा समर्थकले थप दबाब सिर्जना गर्न पनि सक्छ ।
मरेर गएको मान्छेबारे टिप्पणी गर्नु सान्दर्भिक होला नहोला । तर, आएका विभिन्न तथ्यहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने के भन्न सकिन्छ भने उनी केही तनावबाट नराम्ररी गुज्रिएका थिए । न्यायिक हिरासतमै रहेकी युवती वा उनका पक्षबाट आइरहेका विभिन्न तथ्यहरुलाई हवाला दिँदै लेखिएका समाचारहरुलाई विश्वास गर्ने हो भने पुडासैनीमा केही महत्वाकांक्षा थिए र केही गलत प्रवृत्ति पनि । घर परिवार भएका पुरुषले सबै लुकाएर अर्की युवतीलाई ढाँटछल गरेर सम्बन्धमा राख्नु गलत हो । आएका तथ्यहरुले उनले यही गरेको भन्छ । आखिर आफूले लुकाएका कयौं सम्बन्धहरुले, राखिएका कयौं सम्बन्धहरुले सिर्जना गरेको तनाव व्यवस्थापन गर्न नसकेरै उनले प्राणत्याग गरेका हुन् कि ? आइसकेका तथ्यहरुले त त्यही भन्छ । बाँकी लुकेका तथ्य त समयक्रममा आइहाल्छ । त्यसका लागि हामीले किन हतार गर्नु ?
पुडासैनी मृत्यु प्रकरणले केही डर पनि थपिदिएको छ । कस्तो डर भने फौजदारी संहिताले व्यवस्था गरिदिएको ‘दुरुत्साहन’ नामक हतियार खतरनाक धारवाला बनेर निस्किन सक्छ । दुरुत्साहन कस्तोलाई मान्ने ? कस्तोलाई नमान्ने भन्ने नभएसम्म यसले त सबैलाई त्रासमा पार्ने भयो । जीवनकालमा विभिन्न व्यक्तिसँग विभिन्न सम्बन्ध कायम भएका हुन्छन् । कसलाई कहाँनेर के मन पर्दैन अनि कसैको नाम पोलेर आत्महत्या गरिदियो भने ? के त्यस्तो अवस्थामा कसैले नाम लिएकै भरमा फलानोलाई कारबाही गरिहाल्ने ? यस्तो आशंका वा त्रास हटाउनलाई अमूर्त दुरुत्साहनलाई परिभाषित गरिहाल्न जरुरी छ ।